Vaovao - Ny tombo-tsoa azo avy amin'ny vera voalamina
Midika hanarahana ny fenitry ny firenena amin'ny vera misy laminated, vera antitra ary vera poaka vita tamin'izy ireo. Anisan'izany, ny fahombiazan'ny fitaratra laminated sy ny vera loaka vita amin'ny vera laminated no tsara indrindra. Ao amin'ny trano maoderina dia tsara ny vokatra azo avy amin'ny insulation, ary nanjary iray amin'ireo antony lehibe handrefesan'ny olona ny kalitaon'ny trano izany.
Ny vera voarary miaraka amin'ny PVB interlayer dia afaka manakana ny onjan'ny feo ary mitazona toerana birao milamina sy mahazo aina. Ny asany fanivanana UV tsy manam-paharoa dia tsy miaro ny fahasalaman'ny hoditry ny olona fotsiny, fa manafaka ireo fanaka sarobidy, vokatra aseho, sns. Ao an-trano. Izy io koa dia mampihena ny fandefasana tara-masoandro ary mampihena ny fanjifana angovo angovo.
Ny tombony maro azo avy amin'ny vera laminated dia mety hisy vokany tsy ampoizina sy tsara amin'ny haingon-trano koa. Ny fitaratra sivily sivily ankapobeny dia ny vera tsotra amin'ny alàlan'ny fizotran'ny hafanana, ny heriny dia nitombo 3-5 heny, mahazaka angovo azo avy amin'ny fiatraikany ivelany na ny fiovan'ny mari-pana nefa tsy tapaka, na tapaka aza, fa koa ny vera manontolo vaky ao anaty vongan-tantely kely toy ny tantely Tsy mora ny mandratra olona ary manana fiarovana azo antoka.
Tsy azo hokapaina ny vera mando. Mila tapahina amin'ny habe izany alohan'ny hahonon-tena ary manana toetra "fanalefahana tena". Araka ny fampiasana isan-karazany, ny vera mora tezitra dia azo zaraina amin'ny karazan-karazan-karazam-boasary, vera semi-tempered, vera antitra rezionaly, vera marihitra fisaka, vera miolakolaka miolakolaka sns. Ohatra, varavaram-pianakaviana maro, anisan'izany ny varavaran'ny lakozia, vita amin'ny vera mangatsiaka. Ny setroka ao an-dakozia dia mirona miangona eo an-tampony rehefa mahandro sakafo, ary raha mampiasa vera voahodina ianao fa tsy hanana izany olana izany. Toy izany koa, ny fizara misy vera lehibe ao an-trano dia mety hampidi-doza ho an'ny ankizy mavitrika voajanahary. Raha vera misy laminasy no ampiasaina dia afaka mahazo aina ny ray aman-dreny. Na dia vaky aza ny vera, ny sombintsombiny sy ny sombintsombiny maranitra dia mijanona eo amin'ilay sarimihetsika mpanelanelana.
Ny vera LED dia antsoina koa hoe vera photoelectric. Power Glass dia fitambaran'ny loharanom-pahazavana sy fitaratra mazava LED ary mamakivaky ny foto-kevitra nentin-drazana ny fitaovan'ny haingon-trano. Azo noforonina mialoha tamin'ny volavolan-tsokosoko fitaratra, ary avy eo tamin'ny alàlan'ny haitao DMX nomerika rehetra hahatratrarana fanovana azo fehezina, fifehezana maimaimpoana ny famirapiratan'ny loharano jiro sy ny fanovana. Ao anatiny, tariby mangarahara tanteraka no ampiasaina, izay miavaka amin'ny tariby tsotra ary tsy mahita tsipika eny ambonin'ny fitaratra. Taorian'ny fitsaboana manokana amin'ny dingana manaraka, dia samy nahazo ny fanamarinana mifandraika amin'ny firenena ny fepetra ara-teknika sy ny fepetra takian'ny fiarovana. fenitra.